Wayne Rooney oo shaaciyey inuu la sii joogi doono kooxdiisa Manchester United – Gool FM
(Manchester) 23 Feb 2017 – Kabtanka Ingiriiska ee Wayne Rooney ayaa shaaca ka qaaday in uu sii joogi doono Manchester United, xilli waayadaan la la xiriirinayay inuu u dhaqaaqi doono dhinaca Shiinaha.
31-sano jirkan ayaa rajaynaya in uu boos joogto ah ka helo safka Manchester United inta ka harsan dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Tababaraha Manchester United ee Jose Mourinho ayaa diiday in uu fasaxo Rooney, waloow weli uu furan yahay suuqa kala iibsiga Horyaalka Shiinaha oo xirmaya 28 bishaan February kolkaasoo wax walba ay suurtogal yihiin in ay dhacaan.
“Waa waqti xiiso leh in aan sii joogo naadiga waxaana rabaa in aan qayb ka sii ahaado.” ayuu yiri Rooney.
Wakiilka Rooney ee Paul Stretford ayaa u duulay Shiinaha si uu u soo eego heshiisyada kooxaha doonaya Rooney iyo kuwa ugu haboon inkastoo aan la shaacin naadiyada sida dhabta ah u doonaya, waloow la tilmaamay Beijing Guoan iyo Tianjin Quanjian.
Rooney oo ah dhaliyaha ugu goolasha badan Manchester United ayaa waxa uu ku guuleystay 5 Horyaalka Ingiriiska ah iyo hal Champions League tan iyo markii uu ku soo biiray isagoo 18 sano jir ahaa sanadkii 2004.
Heshiiska Rooney ee Manchester United ayaa dhacaya 2019, waxaana la sheegayaa in uusan u ciyaari doonin koox aan ka ahayn Manchester ama Everton marka ay timaado Horyaalka Ingiriiska.